IMISA JEER KU NOOL NOLOSHA KAROOTADA FRUITING, INTEE BAY KU KORAAN BEERTA LAGA BILAABO WAKHTIGA BEERTO ILAA MAALMAHA GOOSASHADA, WAA MAXAY ERAYGA AH BISAYLKIISA IYO GOOSGOOSKA 1 HANA WEELKA RUSSIA? - BEER CAGAARAN
Wax kasta oo ku saabsan goosashada dabacasaha: imisa jeer ku nool nolosha miraha, markaad ka soo ururiso sariiraha, sida loo soo saaro dushooda iyo santuuqa kale
Karootada ayaa muddo dheer la soo ogaaday dhammaan beerta. Wax qarsoodi ah kuma jiro beerashada, waxa ugu muhiimsan waa in la sameeyo dadaal, ka dibna miraha waxay heli doonaan qaabka ugu fiican, iyo sidoo kale tirada dalagga iyo noloshooda raadka ay kordhayso.
Waxyaalaha ay saameyn ku yeelanayso dhalidda wanaagsan ee runtii iyo haddii ay suurtogal tahay in ay ka baxdo beerta, jawaabaha kuwan iyo su'aalo kale oo muhiim ah oo ku saabsan carrada ayaa sii akhriya maqaalkan.
Waxyaabaha Saameeya Saadaasha Wanaagsan
Wax-soosaarka dabacasaha wuxuu ku xiran yahay noocyada kala duwan. Waxyaabaha dhalidda ee noocyo Bisaylkiisa hore waxay noqon doontaa qiyaastii 30-60 kg halkii mitir labajibbaaran. Si kastaba ha ahaatee, beergooyska laga soo bilaabo bartamihii xilli-ciyaareedka ama goor dambe waxay gaareen 40-70 kg.
Waxaa jira noocyo badan oo bixiya lambarka rikoodhka dalagga, oo gaaraya 100 kg halkii mitir labajibbaaran. Si loo gaaro natiijooyin wanaagsan waa adag tahay. Si arrintan loo sameeyo, waxaad raacdaa dhammaan talooyinka loogu talagalay dabacasaha sii kordhaya.
Waa muhiim! Haddii aadan raacin xeerarka, waxaad gabi ahaanba waayi kartaa goosashada. Xeerarkan waxaa ka mid ah tayada hilibka iyo meel qorrax leh.
Mid ka mid ah muddooyinka ugu muhiimsan waa muuqaalka caleemaha ugu horeeya. Waxaa jira fursad ah in lagu kordhiyo wax-soosaarka ilaa 40%. Si arrintan loo sameeyo, samee waxyaabaha soo socda:
horey loo qooyay miraha, iyaga oo biyaha ku jiray biyo lix saacadood ah, ka dibna la qalajiyey oo la beeray;
ka hor inta aan beero iyo ka dibna ciidda waa in ay wax yar tamped;
ka hor inta uusan soo bixin geedo u baahan tahay si joogto ah u qoyan ciidda.
Waxaa jira tiro ficillo dheeraad ah oo loo isticmaalo si loo kordhiyo dhalidda.
Tani waxaa ka mid ah badi wareegga dalagga, taas oo ka caawisa yareynta suurtagalnimada dhaawaca midhaha cayayaanka.
Wixii karootada lagu beeri lahaa waa in ay doortaan aag dhul ah.
Kordhi biqilka abuurku wuxuu caawin doonaa dabacsanaanta qoto dheer. Nidaamkan waa in la fuliyaa xilliga dayrta.
Marka xigta waxay imanaysaa ciidda bacriminta. Waxay kordhin kartaa nolosha khudradda khudaarta.
Iyo, dabcan, waxay u baahan tahay waraabin dhexdhexaad ah iyo dhar labalaab ah.
Intee in le'eg ayaad karootada ku heli kartaa 1 ha iyo 1 hektar oo Russia ah?
Haddii aad si fiican u daryeesho miraha la beeray ee karootada, beergooyska hal hektar waxay noqon kartaa inta u dhaxaysa 40 ilaa 100 tan. Tirada dalagyada ka imanaya hal gacan ayaa gaari kara hal tin.
Caawimaad! Ha ilaabin in dhalidda ay ku xiran tahay bacriminta carrada, daryeelka dalagyada iyo dhowr arrimood oo cimilada ah.
Imisa jeer ayaad ku nooleyd nolosha miraha?
Dareemku wuxuu udhaqaaqaa kaliya hal mar noloshiisa. Si aad u hesho miraha iyo abuurka, khudradda ayaa ka hadhay jiilaalka dhulka. Ka dib markii ubax iyo ururinta abuur, karootada dhimanaya ayaa si fudud loo rujin.
Waqtiga koritaanka laga bilaabo beeritaanka ilaa koriinka
Ka fikir inta maalmood ee karootada ku koraan berrinka bannaan ee laga beerayo wakhtiga beergooyska. Waqtiga karootada goosashada waxay ku xiran tahay inta badan noocyada kala duwan.
Sidaa darteed, noocyo hore waxay caadi ahaan koraan 65-80 maalmood.
Nooc dhexdhexaad ah waxay u baahan tahay waqti dheeraad ah. Badanaa taasi kama badna 100 maalmood.
Dhirta dhexe iyo dabayaaqadii waxay u baahan yihiin 90-115 iyo 110-130 maalmood oo ah Bisaylkiisa, siday u kala horreeyaan.
Dib u soo celinta waa inay bilaabaan inay hogaamiso wax ka hor caleemaha ugu horeysay ee dabacasaha.
Bannaanka u khibrad leh waxay soo jeediyaan saxiixa noocyo dabacasaha lagu beeray, si aanay u qaloocin wakhtigii beergooyska.
Xilliga guga wuxuu caadi ahaan dhamaadaa xilliga dayrta. Waqtiga ayaa saameynaya xajmiga iyo tayada dalagga, iyo sidoo kale nabadgelyada dalagyada xididada xilliga jiilaalka. Isbedelka xaaladaha cimilada ayaa beddeli kara wakhtiga qaadashada tirada aasaasiga ah ee khudradda, laakiin xeerarka aasaasiga ah ayaa weli ahmiyad leh.
Si habsami ah Si loo hubiyo in beergooyinku ay lagama maarmaan tahay, dalagyo badan oo xidid ah ayaa lagu qodaa saamiga.. Haddii ay horay u baxaan xididada yaryar, markaa waa waqtigii lagu nadiifin lahaa karootada. Haddii kale, waxaa dhulka ka haray labo toddobaad oo kale.
Digniin! Dhamaadka bisha Sebtembar waa xilliga ugu fiican ee goosashada. Marka la ururinayo inta lagu jiro muddadan, waxaa jira suurtogalnimada dhalidda ugu badan iyo kaydinta mudada dheer.
Goormaad u baahan tahay inaad nadiifiso adigoo qaan-gaar ah?
Karootada hore waxaa laga qaadi karaa 60-80 maalmood ka dib muuqaalka caleemaha koowaad. Si kastaba ha ahaatee, dabacasaha noocan ah waa mid aan ku habooneyn kaydinta dheer, taas oo ah sababta ay inta badan loo beeray waxoogaa yar. Si xididdada dabacasaha hore uma aysan dhicin dhadhanka, waa in la qodo badhtamaha July.
Karootada ugu caansan waa xilliga bartamahakuwaas oo muddadii Bisaylku ay u dhexeeyaan 80 ilaa 110 maalmood. Ururinta ka mid ah dabacasahaas badiyaa waxay ku dhacdaa bartamaha Sebtembar.
Noocyo dabacsan cimilada wanaagsan, ma aha oo kaliya Sebtembar, laakiin sidoo kale bilawga Oktoobar waxaa lagu kharash gareeyaa beerta. Waqtiga xajinta ayaa sidoo kale door weyn ka ciyaaraya. Karootiga waxaa badanaa la beeray tan ugu horeysay. Waxaa lagu talinayaa in la qoro taariikhda beereedka ee bacaha laga bilaabo abuurka oo ku hayn ilaa dhammaadka xagaaga. Tani waxay ka caawisaa xisaabinta taariikhda goosashada.
Sida loo go'aamiyo muuqaal ah in dabacasku diyaar u yahay?
Xaqiiqooyinka soo socda waxay tilmaamayaan diyaargarowga dabacasaha.:
Caleemaha yar yar ee la qallajiyey, iyo sidoo kale deegaankooda.
Yellowed caleemaha dhexe muujinaysaa in dabacasaha jiran yahay, ku xanuunsado cayayaanka ama waa mid aad u dheer beerta.
Dhadhanka dabacasaha iyo muuqaalkiisa: midho dhalaalaya oo casaan leh oo leh dhadhan kuu habboon.
Marka la eego xididada cad ee dalagga xididka ah waa suurtogal in la daahiyo goosashada.
Qaboojinta xilliga dayrta waxay saameyn ku yeelataa dalagga aasaasiga ah: hoos udhaca tartiib tartiib ah ee heerkulka ayaa hoos u dhiga koritaanka dushooda, laakiin dalagga dalagga ayaa kor u kaca size.
Next, video video ah sida loo go'aamiyo waqtiga nadiifinta karootada:
Ma suurtagal tahay in laga tago dalagga dalagga?
Karootada waa warshad qabow u adkaysata, ma cabsanaayo dhaxan, sidaas darteed waxaa hubaal ah in laga tagi karo dhulka dhulka loogu talagalay jiilaalka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa habboon in la tixgeliyo in qadar yar oo baraf ah iyo dhaxan culus, karootada waa in lagu daboolaa wax. Guga, karootada waa in isla markiiba qodo, sababtoo ah markaa waxay noqon doontaa mid aan ku habooneyn cunista.
Talaabo tallaabo tallaabo ah: sida loo goosanayo?
Goynta waa habka ugu badan ee wakhti qaadaya ninkii beerta oo idil, laakiin si kastaba ha ahaatee ma ka dhigeyso mid wax yar oo wanaagsan. Waxaa jira labo siyaabood oo soo goynaya: gacanta oo la isku daro.
Iyadoo habka loo adeegsado, marka hore ka saar caleemaha qallalan ee caleemaha, sidaa darteed mustaqbalka ma faragalinayaan ururinta.
Kadibna majarafadu wuxuu dhigayaa qashin. Waxaa lagula talinayaa inaad sidaan u sameyso si taxadar leh intii suurtagal ah si aad uga fogaato waxyeellada karootada.
Marka xiga, karootada si tartiib ah uga soo jejebin dushooda, sariiraha uga bax wakhti gaaban, sidaas darteed u oggolow dhulka iyo khudaarta cagaaran in ay qalalaan.
Waa muhiim! Ha karin karootada isla markiiba ka dib roobka, sababtoo ah waxay kordhinaysaa halista waxyeellada.
Waqtiga xaadirka ah ee adduunka waxaa jira laba siyaabood oo ah khudradda goosashada.
Habka ugu horreeya waa sidan soo socota: marka ugu horeysa ee caleenta dusha laga saaro, kadibna isticmaal kaliya isku dar ah oo xoogga saaraya goosashada lafteeda. Si kastaba ha noqotee, noocan ah goosashada ayaa ku lug leh khatarta sare ee dhaawaca uur-jiifka ah.
Qaabka labaad, waxaa loo adeegsadaa nooca loo yaqaan "homage dog diger". Xaaladdan oo kale, karootada ayaa soo xareeyaa suunka suunka dushooda, ka dib marka dalagga dalagga loo diro qalab khaas ah kaas oo jaraya dushooda. Halista dhaawaca uur-jiifku waa mid aad u yar.
Siyaabaha looga saaro dushooda
Ha ku qasbin dusha sare ee gacmaha. Doorashada ugu wanaagsani waa in la gooyo mindi. Waa in la ogaadaa in haddii canjeerada yaryar ay ku sii jiraan dabacasaha, markaa waxay u dhowdahay guga, dushooda ayaa bilaabi doona inay koraan mar kale, taas oo iyaduna aysan yareyneynin qiyaasta dalagga dalagga, laakiin sidoo kale si weyn ayay uga sii dari kartaa qiimaha nafaqada. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo calaamadda ilaa 1-2 millimitir.
Khudaarta cagaaran ka hor intaad ku ridin sanduuqa nadiifinta hoostiisa isla markaaba ka dib markaad ka saarto dushooda si aad u yar hawo qalajiso. Ka dib markaa, karootada waa la kala soocayaa, ka takhalusi midhaha waxyeellada leh. Karootada loogu talagalay kaydinta jiilaalka waa in lagu hayaa qol qabow 5-6 maalmood.
Waxay qaadataa waqti badan iyo dadaal si ay u koraan dabacasaha, laakiin dalagyo taajir ah oo tayo sare leh oo khudaar caafimaad leh ayaa xannibaya dhammaan dhibaatooyinka. Waxa ugu muhiimsan waa in la raaco shuruucda aasaasiga ah ee beerto iyo daryeelidda khudaarta cagaaran. Ka dibna khudradda dhadhanka ah iyo kuwa caleenta ah waxay ku jiri doonaan cuntada maalinlaha ah ee qoyska oo dhan, iyaga oo bixiya dhammaan nafaqooyinka iyo walxaha raadraaca.